ဘယ်အရာတွေက သင့်ကလေးကို ခေါင်းကိုက်စေတာလဲ? - Chit MayMay
Home Child Care ဘယ်အရာတွေက သင့်ကလေးကို ခေါင်းကိုက်စေတာလဲ?
ဘယ်အရာတွေက သင့်ကလေးကို ခေါင်းကိုက်စေတာလဲ?
ကလေးတွေဟာ လူကြီးတွေလိုပဲ ခေါင်းကိုက်ခြင်း အမျိုးမျိုးကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေမှာ ခေါင်းကိုက်တာဟာ များသောအားဖြင့် ပုံမှန်ဖြစ်ပြီး စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ ဒီဆောင်းပါးမှာ ကလေးတွေကို ခေါင်းကိုက်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ပြောပြပါမယ်။
ခေါင်းကိုက်ခြင်းက ဘယ်အသက်အရွယ်မဆို လူတိုင်းမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သင့်ကလေးကို ကျန်းမာသော လူနေမှုပုံစံဖြင့် နေထိုင်စေခြင်းဟာ သူတို့အတွက် ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်မှာ သေချာပါတယ်။ ကျန်းမာတဲ့ လူနေမှုပုံစံမှာ ကျန်းမာစွာ စားခြင်း၊ တတ်ကြွစွာ နေထိုင်ခြင်းနှင့် လုံလောက်စွာ အိပ်စက်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်။
ကလေးတွေမှာ ခေါင်းကိုက်ခြင်းအများစုကို အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများနှင့် ကုသနိုင်ပါတယ်။ ခေါင်းကိုက်ရတာဟာ အကြောင်းရင်းများစွာ ရှိတာကြောင့် တိကျတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။ မကြာခဏခေါင်းကိုက်ခြင်းဟာ ကျောင်းမှာ ပြဿနာရှိစေနိုင်ပါတယ်။ကလေးတွေမှာ ခေါင်းကိုက်ခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းတွေေကို သိရှိခြင်းက ဒီနာကျင်မှုကို တွန်းလှန်ဖို့ များစွာအထောက်အကူပြုပါတယ်။
၁။ စိတ်ဖိစီးမှု အကြောင်းရင်းများ
စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုက ကလေးတွေမှာ ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို အများဆုံးဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းမှာ ပြဿနာရှိခြင်းက ကလေးကို စိတ်ဖိစီး စေနိုင်ပါတယ်။ လူတိုင်းမှာ စိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာ ရှိကြတာကြောင့် ကလေးတွေမှာလည်း မရှိဘူးလို့ ပြောမရပါဘူး။ ကျောင်းမှာ ဖြစ်စေ၊ အိမ်မှာဖြစ်စေ ဖိစီးမှုတွေ ကြုံရတာ၊ မိဘတွေရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေတာ၊ ပြောင်းရွှေ့တာတွေဟာ ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
၂။ အစားအသောက် မမျှတခြင်းကြောင့်
နံနက်စာ မစားခြင်းကဲ့သို့သော အကြောင်းရင်းတွေက ခေါင်းကိုက်စေပါတယ်။ သင့်ကလေးကို သစ်သီးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များပါဝင်တဲ့ မျှတသော အစားအစာတွေ ကျွေးဖို့လိုပါတယ်။ သတိပြုသင့်တာက ကဖိန်းဓါတ်အများကြီးနှင့် အချို့သော အစားအစာတွက ကလေးတွေကို ခေါင်းကိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
၃။ ရေဓါတ် မလုံလောက်ခြင်း
အရည်များများ မသောက်ခြင်းက ကလေးမှာ ခေါင်းကိုက်မှု ဖြစ်စေတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အပြင်ထွက်ဆော့တဲ့ ကလေးတွေအတွက် ပူပြင်းတဲ့ ရာသီဥတုမှာ ချွေးပိုထွက်စေပါတယ်။ ကလေးကို ရေနှင့် အရည်လုံလောက်အောင် တိုက်ပေးရပါမယ်။
ခေါင်းကို တစ်ခုခုနှင့် ထိခိုက်မိတာ၊ တိုက်မိတာတို့ဆိုရင် ကလေးငယ်တွေကို ခေါင်းကိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ခေါင်းကိုက်တာက အပျော့စားဖြစ်ပေမယ့် ကလေးရဲ့ ခေါင်းကို မာကျောတဲ့အရာနှင့် တိုက်မိပါက ဆေးကုသမှု ခံယူပေးပါ။
၅။ သူတို့ရဲ့ ဦးနှောက်ကို ဂရုစိုက်ပေးပါ
ကလေးရဲ့ ဦးနှောက်ထဲမှာ အကျိတ်လိုမျိုး ပြဿနာရှိတယ်ဆိုရင်လည်း ခေါင်းကိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ brain tumor သို့မဟုတ် သွေးထွက်ခြင်းက ဦးနှောက်ရဲ့ အချို့နေရာတွေကို ဖိအားပေးနိုင်ပြီး အချိန်ကြာလာတာနှင့် အမျှ နာတာရှည် ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။ အများအားဖြင့် ဦးနှောက်ပြဿနာတွေမှာ ခေါင်းကိုက်ခြင်းအပြင် မူးဝေခြင်း၊ ဟန်ချက်မညီခြင်း၊ အမြင်အာရုံပြဿနာများ ကဲ့သို့သော တခြားပြဿနာများလည်း ရှိပါတယ်။
Previous articleသားသားမီးမီးတွေကို နို့ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာ ကျွေးနိုင်တဲ့ အစားအစာ (၁၀)မျိုး
Next articleကစားစရာတွေမှာ စွဲကပ်နေနိုင်တဲ့ မှိုကြောင့် သင့်ကလေးကို ဒုက္ခမရောက်စေဖို့